तपाईको आजको दिन कस्तो छ ? हेर्नुहोस् असार ७ गते मंगलबारको राशिफल – Annapurna Post News
तपाईको आजको दिन कस्तो छ ? हेर्नुहोस् असार ७ गते मंगलबारको राशिफल
June 20, 2022 sujaLeaveaComment on तपाईको आजको दिन कस्तो छ ? हेर्नुहोस् असार ७ गते मंगलबारको राशिफल
आज श्री शाके १९४४ बि.स.२०७९ असार ७ गते मंगलबार इश्वी सन २०२२ जुन २१ तारीख आषाढ कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथी पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र आयुमान योग वालव करण चन्द्रमा मिन राशिमा आनन्दादि योगमा काण योग नल नाम संवत्सर सुर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु अष्टमीव्रत भौमाष्टमी गोरखकालीपूजा देउपाटनमा त्रिशुलयात्रा भलभलअष्टमी (ज्यो.प.सरोज घिमिरे)
तुलाराशि (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते) तपाईको परोपकारी भाबनाको फाईदा अरुले उठाउनाले तपाई कमजोर रहनु हुनेछ । अगाडि सारेका व्यक्तीद्वारा सम्पादित कार्यहरु बिफल हुनेछन । अर्काको खुसिको लागी अनावश्यक समय र धन ब्यय गर्नु पर्नेछ । आफ्नो चार्तुयताले कार्य सम्पादन गर्दा सबैको चर्चा को बिषय भईन सकिनेछ ।
कति खर्च गरे त बालेन साहले चुनावमा ? हेर्नुहोश खर्चको तालिका
पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, ज्येष्ठ २४ गते मंगलबार, तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
२०७९ बैशाख ८ गते बिहिबार, थाहा पाउनुहोस् तपाईंको राशिफल ! पाथिभरा माताले सबैको रक्षा गरुन्